Ndi igwe eji agba belt kwesiri ya? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Belt mbanye mpịachi igwe kwụ otu ebe - olee otu ị ga-esi dozie
Belt mbanye mpịachi igwe kwụ otu ebe - olee otu ị ga-esi dozie
Belt draịvadị elu karịa agbụdraịvan'ọtụtụ akụkụ. Ha dị mfe ihicha ma lekọta, na-adịru ogologo oge, ma dị jụụ ma dịkwa nro karịa. Agbanyeghị, ha dịkwa oke ọnụ, nke na-ewelite ọnụ ahịa niile nkeanyịnya igwendị ha ha ike.
Anọ m na-agbagharị igwe kwụ otu ebe gafee kọntinent kemgbe 2010 na mgbe ihe karịrị 100,000 kilomita na mba 100, adị m njikere ịgwa gị na ọ nweghị njem ka mma, ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ịnyagharị. Enwere m eriri site n'ọzara kachasị mma, n'ime ogige snow na-ekpo ọkụ, site n'oké ọhịa, n'akụkụ ụsọ mmiri, n'okporo ụzọ apịtị na elu nke ụzọ kachasị elu n'ụwa. Echere m na mmadụ ole na ole nọ n'ụwa nwere otu ụdị ahụmịhe n'ụwa dịka m.
N'isiokwu a, anyị lebara anya n'ihe bụ eriri ụgbọala, ihe uru na ọghọm dị, mgbe ahụ, m ga-agabiga ajụjụ a na-ajụkarị iji jide n'aka na ọ nweghị nkume a hapụrụ. Oh na nke a abụghị akwụkwọ nkwado, etinyeghị m ego na ụlọ ọrụ ndị na-agba belt ma enwere m ike iji agbụ ígwè na igwe kwụ otu ebe. Abụ m naanị nnukwu onye na-akwado bel na enwere m olileanya na ị ga-ahụ ihe kpatara n'oge na-adịghị anya.
Ya mere, ihe bụ belt drive? A na-eji eriri eme ihe iji mee ka ndị na - akwado igwe ịnyịnya nke 10,000 na - agba ịnyịnya nke draịva ịnyịnya nke 150 - na, na nso nso a, ụgbọala nke ọtụtụ ịnyịnya ígwè. Ateslọ ọrụ Gates mepụtara ihe mbụ ha na-arụ na ụgbọ ala ihe dị ka otu narị afọ gara aga, taa ha bụ akara belt kachasị mma maka ịnyịnya ígwè. A na-eji polymer ejiri ọtụtụ ụdọ carbon carbon mee ka ọ dịgide onwe ya.
A na - ejikọ ha mgbe niile na nchara nchara na eriri igwe. Kedu ihe kpatara m ji chee na eriri akwa bụ ụgbọ oloko kacha mma? Nke mbu, eriri igwe nwere ogologo ndu. Nwere ike ịtụ anya na eriri belt ga-adịru atọ ruo ugboro anọ karịa otu agbụ.
Nke ahụ karịrị kilomita 30,000, ọbụlagodi ọnọdụ ịkwọ ụgbọala dara ogbenye nke a na-atụkarị m na ya! Na mgbakwunye, ha enweghị mmetụta na mmiri na nnu, nke mere na enweghị nchara ebe a ọbụlagodi ọnwa ole na ole nke ịgba ịnyịnya ígwè site na oge mmiri ozuzo siri ike. Nọmba abụọ bụ na eriri chọrọ obere ka ọ ghara mmezi. Belts anaghị agbatị, ha achọghị mmanu mmanu, ha anaghị ete mmanụ, ha na-ehichapụ apịtị n'ụzọ dị ịtụnanya.
Igwu mmiri na-abụkarị ihe na-egbochi ha ịga. Nọmba nke atọ, eriri draịva enweghị mkpọtụ. You ma mgbe agbụ gị dị ọcha na mmanu ya ma na-agba aghara aghara? Ọfọn, nke ahụ mara mma oge niile! Nọmba nke anọ, eriri dị ọkụ karịa agbụ.
Nke ahụ pụtara na enweghị ike ijikọ ya na derailleurs, chainring ma ọ bụ cassettes, mana enwere ike iji ya na gearbox na crankset ma ọ bụ gia na wheel azụ. Number abụọ, ị chọrọ eriri dakọtara etiti! Ebe ọ bụ na eriri na-abụkarị otu, a ga-enwerịrị etiti gị na belt splitter na azụ ka ị wee nwee ike itinye eriri na igwe kwụ otu ebe gị. Eku ahụ ga-enwerịrị 'nnwale siri ike' iji hụ na etiti ahụ adịghị atụgharị nke ukwuu na eriri ahụ na-apụ na azụ azụ.
Number atọ, nnọchi akụkụ na-ahụghị na-ahụkarị igwe kwụ otu ebe ụlọ ahịa. Onwe m, ahụtụbeghị nke a dị ka nsogbu, zụta akụkụ m niile na-echekwa ma na-enwekarị eriri aka m mgbe niile. M na-agakarị ọnwa 18 tupu m chee echiche maka ịtụ akụkụ.
ofu igwe kwụ otu ebe
Nke a bụ otu silisi silin nke ga-efu gị ihe ruru $ 60 kwa kilomita 7,500. Maka nkọwa, nke ahụ bụ otu ọnụahịa dịka ogologo oge na-adịgide adịgide anyị nwere, nke na-eyi n'etiti 5,000 na 7,000 kilomita. Na ọnụ ọgụgụ 5, ọ bụ obere ọrụ ike dị mma.
O doro anya na ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ ụgbọ oloko kachasị arụ ọrụ nke nwere arụmọrụ nke ọma na-agabiga ngwa ngwa niile n'etiti 95 na 98 pasent. Ebe ọ bụ na ị ga-eji nnyefe na igwe kwụ otu ebe na eriri, enwere mwakpo esemokwu ọzọ. Dabere na data dịịrị anyị, Shimano hubs na Pinion gia dị ntakịrị karịa 90 pasent nke ọma, ebe ụlọ ọrụ Rohloff na-abawanye ruo ihe karịrị 94 pasent.
Ikike ịrụ ọrụ nke ọma bụ otu n’ime ihe ndị mere na ị naghị ahụkarị ngwa ngwa na eriri draịva n’ọsọ ịgba ịnyịnya. Mgbakwunye ndị ọzọ nwekwara ike ime na eriri ahụ, mana nke a dị obere karịa nke nnyefe ahụ n'onwe ya. Ugbu a anyị abịarutela ajụjụ niile a na-ajụkarị gbasara draịva.
Kedu ihe Gates Carbon Drive na-adị? Ọ na-anya dị ka agbụ dị mma, mana o nwere hum dịtụ iche. N’agbanyeghi na odidi ya, odi ya nma ma sie ike dika agbu. Kedu otu esi edozi belt? Ọ dị mfe wepu njikọ yinye n'ụzọ.
Belts, n’aka nke ọzọ, emepụtara ka edochie ya. Kama iburu agbụ ígwè, ọ ga-adị mma iweta eriri mapụtara nke na-agbagharị ruo obere nha. M naanị agbajiri 19,000 kilomita nke eriri ochie na afọ 10 gara aga, ya mere ịgbanwe belt mberede anaghị abịa n'uche.
Kedu mgbe ị mara na eriri akwọla nká? N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ bụ ngwongwo azụ nke na-ebu ngwa ngwa ngwa ngwa na eriri ụgbọala, ezé nwere ike ịdị oke nkọ! Ebe ọ bụ na anaghị m arụ ọrụ nke ọma, atụgharịrị m ụgbọ okporo ígwè m niile ka m gbachara anya ihe dị ka iri puku kilomita atọ. Achọpụtabeghị m ezi njedebe nke eriri ebe eriri ga-akwụsị ịrụ ọrụ, mana ọ dị ka ndụ abanyela ka Gates webatara igwe eji agba igwe ọhụrụ n'izu a! Kedu ihe dị na mgbochi belt? O nwere ike ịbụ na ị hụla isiokwu ndị mmadụ na-atụkọta ihe dị arọ na pedal iji gosi ọdịiche dị na nkwụsi ike mbanye n'etiti eriri na yinye. Ule ndị a bụ ntakịrị ihe na-eduhie dịka esemokwu dị n'etiti agbụ na eriri na-abawanye na ọnụọgụ dị iche iche - ntụgharị nke eriri bụ n'ezie okpukpu anọ dị obere.
E nwere oge mgbanwe ebe eriri na-arụ ọrụ nke ọma karịa agbụ mgbe ị na-agba ọsọ na narị abụọ na iri na abụọ watts. Nke a dị ntakịrị karịa nrịbama ndị na-ahụkarị site na ndị na-agba ịnyịnya, yabụ na-atụ anya ihe dị ka ọkara watt nke slack na sistemụ belt n'okpuru ọnọdụ ịgba ịnyịnya, mana o yikarịrị ka ọ dị mma ịrụ ọrụ n'ọnọdụ ọjọọ n'ihi otu eriri nwere ike wepu unyi site na ngwa. Agbanyeghị, ọ bụrụ na iji akara siri ike karị, ị nwere ike belata erughị ala belt n'okpuru nkwanye.
Haven't nụbeghị nke a n'ọnụ m, mana m ji nwayọ na-ebelata eriri eriri na Koga m n'afọ gara aga ma n'eziokwu na ọ na-akwa emo. My belt nwere ike ugbu a na-emetụ m yinye ịnọ, ọ dị nnọọ elu karịa nke kacha nta na m nwere ike ghara tụrụ ya! Ma abụ m onye ọkwọ ụgbọ mmiri siri ike, nke nwere oke ibu dị arọ na-ebugharị n'okporo ụzọ ugwu ugwu dị egwu. N'ịgba mgbatị m na ike m na-agba, eriri m na-agba nwere ike ma ọ bụ obere esemokwu karịa ụdọ.
Naanị m na-akwado ịnwale nke a na eriri eriri ejiri, nke ga-eme ka eriri ahụ nọgide na-agbanyeghị na eriri ahụ gafere. Kedu ihe mmezi ahụ dị ka ya? Mgbe ị na-agbagharị n'ọnọdụ ndị na-adịghị mma, ọ bụ ezi echiche iji brọsh ịsa ezé na mmiri iji kpochapụ nsị ọ bụla site na sistemụ - ọ bụrụ naanị iji belata nkedo na akwa na ngwa gị. Na ọnọdụ akọrọ na uzuzu dị mma, draịvụ belt nwere ike mgbe ụfọdụ na-akpata mkpọtụ na-akpasu iwe.
Enwere ike idozi nke a site na iji ihe silicone na-egbu na eriri gị ozugbo. Ana m emezi mmanu silicone a na-azọcha ọka, nke na-eme ka mmiri dịtụ obere ma na-adọta ájá ọzọ na obere oge, mana ọ dị ka ọ chọrọ obere ojiji. A na-ahụkarị ihe eji eme ihe a na-emepụta ihe na-emepụta ihe Rohloff na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ.
Naanị chefuo maka osisi na-elekọta Hanseline belt, ọ dị oke nnyapade na hoo haa na ngwaahịa dị egwu maka eriri. Otu esi edozi mgbatị Belt N'adịghị ka agbụ, eriri anaghị agbatị oge, na-ebute ezi set ma na-echefu drivetrain. Enwere ụzọ abụọ dị iche iche iji dozie esemokwu ahụ na eriri.
Fọdụ igwe kwụ otu ebe na - eji ndị na - eme njem azụ azụ, mana mgbe ha na - agwa ndị injinia igwe kwụ otu ebe okwu, ọ dị ka shea nkwonkwo mgbado ụkwụ na - enye ohere maka triangle azụ ga - ekwe omume nke kachasị ike iji nwee esemokwu belt. Nwere ike iji ekwentị gị chọpụta esemokwu nke eriri gị. Site n'iwepu eriri ahụ, ngwa ekwentị gị na-ewepụta oge esemokwu ma chọpụta ma esemokwu eriri gị ọ dị mma.
Dị ka ị nwere ike ịhụ eriri m dara n'okpuru oge. Mana ọ bụrụ na anyị mee ka ihe niile sie ike, anyị nwere ike ịgụ. Ọ bụ na eriri ebibi biarin? Enwere ike ịnyịnya ígwè nwere eriri n'ikike kachasị na eriri beliti nwere ike mebie nkụji nká.
Ma na igwe kwụ otu ebe e mere maka eriri, okpokoro siri ike maka esemokwu ga-adaba na nke onye na-agba ịnyịnya na-eji agbụ na ịdegharị na 250 watts, nke na-adịghị ahụkebe. Enweghị oke ọnụọgụ gia? Enwere akụrụngwa azụ anọ, nha nha anọ na ogologo eriri iri abụọ ịhọrọ. Nke a agaghị abụ naanị mmachi maka ịgagharị na njem.
Nwere ike ịtụgharị etiti maka eriri belt? Eweere m okpokolo agba abụọ na nke onye na-ewu ụlọ maka ka e mee ka eriri azụ dị n'azụ n'ime triangle azụ. Ha na-arụ ọrụ nke ọma, mana m ga-eji esemokwu dị elu dị ka azụ triangles nwere ọtụtụ akụkụ akụkụ na akụkụ karịa eriri eriri raara onwe ya nye. Enwere ndị ọzọ na-emepụta belt? Gates na-achịkwa ahịa kpamkpam ma a bịa n'ihe banyere eriri draịva, mana enwere ndị nrụpụta ole na ole na-enye ndị ọzọ gụnyere Veer, Accord na Driveline.
esi ọcha igwe kwụ otu ebe
Veer dị ka ọ kachasị nwee nkwa ma nwee nnukwu uru karịa Gates - eriri ha nwere ike kewaa, nke pụtara na ha nwere ike ịdakwasị igwe kwụ otu ebe ọ bụla! Ebe ọ bụ na njedebe azụ nke ịnyịnya ígwè a na-ahụkarị esighị ike, ana m eche na usoro Veer nwere esemokwu dị elu mgbe ọ na-agbanwegharị igwe. Mana nke ahụ pụtara na ị ka na-enweta uru niile nke eriri ụgbọala, yabụ echere m na ọ bụ ngwaahịa dị jụụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịmata ihe na-achọghị igwe kwụ otu ebe kpamkpam. Ka anyị chịkọta ihe ahụ! Enwere m olileanya na ozi a dakwasịrị ụdị okwu niile dị na eriri.
Anọ m na-akwọ ụgbọala na-adọkpụ site na ndị na-agba ọsọ ma na-akpọga ha ebe kachasị anya n'ụwa maka afọ 10, echekwara m na ọ nweghị ụzọ ka mma maka ịgagharị, ịnyagharị, na njem. Ọ bụrụ na echiche nke usoro gia dị ka Rohloff ma ọ bụ Pinion kwenyesiri gị ike, jide n'aka na ị gafere usoro nhọrọ ma jikọta ya na eriri belt. Ha na-adịgide adịgide, na-enweghị mmezi-enweghị nchekwa, ọkụ na jụụ ịkwọ ụgbọala.
Can nwere ike ịkwado ọdịnaya a na Patreon, ị nwere ike iso m @ ịnyịnya ígwè na Instagram na Facebook, lelee Ntuziaka Ndị Bikepacking Bike na Buyercle Buyer's Guide, chọpụta ihe ndị dị mma na CyclingAbout.com, hapụ okwu n'okpuru na nke a bụ Ihe llema Aka - mee ka m kwenye na agbụ dị mma karịa eriri!
Gịnị bụ ihe kasị mma mpịachi igwe kwụ otu ebe na ahịa?
IheBest mpịachi BikesNwere ike ịzụta ugbu a
Gba ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ na-aghọwanye ewu ewu dịka ụzọ isi agagharị na ịchekwa oge na ego mgbe ị na-aga. Maka ụfọdụ, ịnya ụgbọ ala site n'ụlọ ruo n'ụlọ nwere ike ime, mana ọtụtụ n'ime anyị bi n'ebe dị anya site na ọrụ iji kwe ka ikike ijikwu ịgba ịnyịnya ígwè na njem ọha na eze wee hapụ ụgbọ ala gị n'ụlọ. Tupu anyị amalite isiokwu anyị na-akọwa igwe kachasị mma a na-agba ọsọ na ahịa, anyị etinyela njikọ na nkọwa maka ngwaahịa ọ bụla akpọrọ, mana otu dị n'ime mmefu ego gị.
kona igwe kwụ otu ebe
Malite na kacha mma mpịachi igwe ngụkọta, anyị nwere Tern Vektorron. Enwere m ọtụtụ igwe kwụ otu ebe - ọtụtụ, ọ bụrụ na ị jụọ nwunye m. Echeghị m n'ezie na achọrọ m igwegharị mpịachi, mana, achọtara m n'ụlọ ahịa, n'ụlọ mmanya ahụ, ọbụnakwa na-arụ ọrụ, na-enwe ihu ọma na-atụgharị igwe kwụ otu ebe n'ime mkpuchi ma ọ bụ n'akụkụ nkuku n'ọnwa gara aga karịa ka m chere na ọ ga-eme .
Tern Vektorron bụ igwe kwụ otu ebe gbanwere ụzọ m si ele igwe mpịachi anya. Ọ bụghị naanị engine ahụ, anwalela igwe eletrik eletrik ndị ọzọ. Ọ bụghị naanị kensinammuo usoro mpịachi usoro na kemeghi kwesịrị ekwesị.
Ọ bụ ihe bara uru bara uru nke igwe kwụ otu ebe na - eme ya ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma ọ bụrụgodi na ịchọghị ịpịkọta ya ọnụ mgbe niile. Ubara nke ihe eji eme tweaks na imewe anyị na-eme ka Vektorron bụrụ igwe kwụ otu ebe. Nri ụkwụ aka nri bụ nke mbughari, na-eme ka igwe kwụ otu ebe pere mpe karịa mgbe achọrọ ịkwanye ya, mana Tern na-aga n’ihu ma nye ebe a ga-etinye pọd wepụrụ n’azụ sadulu ahụ.
Vektorron na-agbakọta n'ụzọ dị mfe ma nwee ike ịpịgharị ya n'azụ ya dị ka trolley ịzụ ahịa mgbe a na-apịa ya. Nanị ọrụ a chebere m ịghara ịhapụ ihe karịrị otu ụgbọ oloko. N'ezie, etiti igwe Vektorron emerụghị na nke a.
Site na ịtụkwasị injinia na crank, nke bụ ebe ike onye na-agba ya si abịa, Tern na-eme igwe kwụ otu ebe nke na-adị ka igwe kwụ otu ebe nkịtị, mana ọ na-agba ọsọ ọsọ. Enweghi ogwe igwe a na-atụghị anya ya ma ọ bụ ọsọ ọsọ anyị na-akpakọrịta na igwe kwụ otu ebe dị ọnụ ala. Inc kpọrọ ndị na-ebu akpa na nhọrọ Tern 'akpa akọrọ' mere ka igwe kwụ otu ebe a karịa ndị nwere ike iri nri.
Enweela m ike belata ibu m ga-ebu mgbe m na-agba ịnyịnya ọrụ n'ọfịs n'ihi na anaghị m agbaji ọsụsọ na igwe eletriki na ọkara. Batrị dị na ya dị mfe ịnweta ma na-emekwa ka ọkụ dị n'ime ya. Naanị nsogbu Anyị nwere nsogbu metụtara njikọ anyị nwere na Vektorron, mana ndị ahịa Tern dị ukwuu ma mezie ya ngwa ngwa.
Ọ dị mfe ịhazi ya nke na m ka nwere ike ịkpọrọ ndị ọgọ m ahụ igwe kwụ otu ebe bụ ndị dabara n'ụgbọala ịnyịnya ígwè ahụ dabara na ụkwụ ụgbọ ala ha ma ọ bụ ebe nchekwa ụgbọ mmiri ha wee hapụ ha ka ha gafee site na Palm Springs. Ndị na-azụ azụ REI hụkwara Vektorron n'anya. Otu onye kwuru na nwunye ya meriri ụjọ ọ na-atụ ịnya ụgbọ ala n'ihi igwe na-etiti igwe na-abawanye ọsọ.
Ndị nyocha Bike Radar kwuru na Vektorron 'ga-eji nwayọ merie nsogbu ọ bụla n'obodo ukwu' ma chee na ọ ga-abụ nnukwu nhọrọ maka ndị ọgba tum tum na-eme njem ogologo oge ma ọ bụ ibu dị arọ ibufe. Vektorron nwere ọtụtụ ihe mgbanwe karịa igwe kwụ otu ebe ọ bụla anyị nwalere, nke pụtara na onye ọ bụla enyere m ka m gbazite igwe kwụ otu ebe, gụnyere nke ọ bụla n'ime ndị enyi m na-agba ịnyịnya, nwere ike pịa n'ọnọdụ dị mma nke ga-eweta nnabata dị ukwuu, ọbụlagodi mgbe igwe eletriki. na-eme ka igwe kwụ otu ebe gaa 32 km / h. Tern na-eme ọtụtụ ụdị Vektorron ndị na-eche na ha bụ ndị ọrụ dị arọ ma ọ bụ ikekwe ha chọrọ ị nweta nkwalite site na e-bike dị ọnụ ala karịa na-aga s10, nke nwere aha aha moto na akpa akwa akpa, mana enwere m Bafang moto na ule m igwe kwụ otu ebe A na-arụ ọtụtụ ọrụ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Next anyị nwere ihe kasị mma ewepụghị teren mpịachi igwe kwụ otu ebe na-aga na Urbana. Oge ụfọdụ ihe ọhụụ dị oke mma, ọ na - eme ka ọrụ dị mfe na ngwaahịa ka mma, mana oge ụfọdụ ịchọrọ naanị ngwaọrụ dị mfe maka ọrụ dị mfe. The Urbana bụ naanị nke ahụ.
Naanị na otu gia na a coaster breeki, ọ bụghị dị ka ike Phill ma ọ bụ Downhill dị ka ndị ọzọ anyịnya igwe ebe a na ule. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ igwe kwụ otu ebe nke ga - ewetara gị obere mgbochi iji rụọ ọrụ ma ọ bụ gbagoro n'okporo ụzọ ụzọ ụgbọ mmiri, nke a nwere ike ịbụ maka gị. Ogwe osisi nke 20-Urbana dị mma karịa obere wiil ndị ọzọ na igwe kwụ otu ebe na ule a ma ọ ga-abụ na a ga-akụpụ ha site na ụzọ okporo ụzọ ma ọ bụ oghere ndị na-adịghị mma.
Na mgbakwunye ọ dị mfe karịa ịchọta tubing nke anụ ọhịa 20 mgbe ị nwetara taya dara ada, ebe nke a bụ igwe elekere igwe BMX. O yiri ka ndị na-azụ ahịa Amazon hà hụrụ Urbana n'anya n'ihi na ọ dị mfe ịgbakọta n'agbanyeghị na ọ dị arọ ma dịkwa obere ma 'ọ siri ike ma dịkwa mma'. Naanị 21.5 pound, Urbana bụ otu n'ime igwe kwụ otu ebe kachasị dị mfe na ọnụego ọnụahịa a, ndị na-enyocha ihe ọmụma nwere ekele maka usoro dị mfe nke igwe kwụ otu ebe na-egbochi mmebi mgbe ọ na-apịa ma buru ya, ma ọ bụ mgbe ị na-elele igwe kwụ otu ebe na ụgbọ elu ma ọ bụ ụgbọ oloko.
Ndị ọkachamara na ndị nyocha Amazon kwuru na ọ na-ewe ntakịrị ọrụ iji kpokọta igwe kwụ otu ebe site na ihe yiri ka ọ bụ M niile na-abata site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere kposara nke ọma. Obi dị anyị ụtọ, igwe kwụ otu ebe dị ọnụ ala iji wepụta dollar ole na ole iji lelee n'ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe tupu ojiji. Na-esote, anyị nwere usoro mmefu ego kachasị mma nke na-aga na e-Joe Epik.
Ruo ogologo oge ma ọ bụ n’elu ugwu, ihe ndị a kpaara ókè na obere wiil nke igwe igwe na-apịachi apịachi nwere ike ime ka ndụ ghara ịda mbà. Tinye akpa nri ma ọ bụ laptọọpụ gị wee rute ọrụ na-adị gị ka ịmechara mgbatị ahụ. Nke ahụ bụ okike, belụsọ ma ịnwere ike ịnwetụ enyemaka site na ọkụ eletrik.
Ọ bụrụ n’ịgaghị enwe ike ije na Vektorron, Epik bụ nhọrọ dị oke mkpa. The Epik abụghị a ọgba tum tum otú ị ga-pedal maka engine na-amalite, ma e nwere bụ a isi mkpịsị aka trotul ma ọ bụrụ na ị chọrọ a obere extra mmiri ọ toụ overụ gafee ugwu ma ọ bụ ọrụ n'aka intersections. Moto ahụ n'onwe ya dị n'azụ azụ, nke na-eme ka igwe kwụ otu ebe dị ka igwe kwụ otu ebe.
A na-etinye ike site na otu wiil. Nke a na - enye ohere ka injin ahụ rụọ ọrụ dị ka Tern n’etiti injin ya ka Epic na - alụ ọgụ n’elu ugwu. Batrị nwere ike iwepu ya na-akwụ ụgwọ zuru oke maka njem njem nke iri anọ na ise, ọ bụ ezie na ọnụọgụ ahụ ga-ebelata ma ọ bụrụ na ị na-arị ugwu ma ọ bụ na-eji akpa akpa etinye na-ebu ibu dị arọ.
Na ise etoju nke pedal aka, M routinely ahọrọ maka larịị atọ na ka na-achụ ndị njem na zuru size anyịnya igwe. Epik ahụ bara uru nke ọma, mana ọ bụghị dị ka Vektorron. Otu onye na-enyocha Amazon kwuru na enwere ike ịgbatị ọdụ oche ahụ iji nweta 6-foot-4-inch anụ ọhịa ma nwee ekele maka nkasi obi nke ndụdụ nkwusioru nke bụ obere nwelite na otu igwe kwụ otu ebe - nke anụ ọhịa ahụ dị elu na ụkwụ isii ọzọ ogologo na ha abụọ nwere ike ịchọta ọnọdụ dị mma, mana ndị na-agba ịnyịnya bụ ndị pere mpe ma ọ bụ toro ogologo.
Ndị ọzọ nwe hụrụ mfe na a pụrụ ịdabere na braking ike nke diski brekị. Ọkachamara ule Ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ nwere ekele dị ukwuu karị ma e jiri ya tụnyere folda ndị ọzọ yana ọsọ ọsọ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 30 kwa elekere. Anyị na-enwekwa mmasị na ọkụ a na-arụ n'ime ụlọ mana ọ dị ya ka ọ bụrụ na ọ ga-adị mma karịa ma onye nchịkwa nwere ọkụ azụ.
Ebe ọ bụ na igwe kwụ otu ebe bu kilogram iri ise n’arọ, ọ bụghị ezigbo nhọrọ maka ndị na-ebu igwe kwụ otu ebe n’elu steepụ ma ọ bụ nwee ọ ridụ na-agba ịnyịnya na-enweghị moto ahụ. Ma na engine on, na igwe kwụ otu ebe na-enwe nippy na ngwa ngwa ngwa ngwa karịa 20 mph ịhụ nkwusioru nke a igwe kwụ otu ebe na ihu ọma nke a pụrụ ịdabere na isiike ndụdụ, nkwusioru ahụ adịghị enye nkasi obi dị ukwuu ma nwee mmetụta dị elu mgbe ị na-agbanye Speed. Na-echegbu onwe m na mmiri na-agbanwe agbanwe. Igwe kwụ otu ebe a nwere ike gbanwee, mana ọ bara uru ịmara na obere wiil ndị ejikọtara ya na ndụdụ na ọnọdụ kwụ ọtọ abụghị nke kwụsiri ike, nke pụtara na ndị mbido kwesịrị ịkpachara anya tupu ha abanye na obodo ahon EEZZD3.
Dahon EEZZ D3 ngwugwu pere mpe - akụkụ nchikota ya bụ 25.6 ụkwụ ogologo, 10.6 ụkwụ ogologo, na 24.4 ụkwụ n'obosara - na ọ dabara na akpa enyocha.
N'ezie, anwara m ya otu a na njem njem dị mkpirikpi gaa Europe. Ebe ọ bụ na amaara m na enweghị m oge maka egwuregwu ma na m ga-agbanwe n'etiti ebe ọrụ dị iche iche na Airbnb m, igwe kwụ otu ebe zọpụtara m nnukwu nrụgide na ego nke gaara abanye n'ụgbọala na tagzi. Mgbe m nwere ogologo njem, mpịachi igwe kwụ otu ebe elu na iwere ya na metro ma ọ bụ bọs bụ ikuku, ọ na-adịkwa mfe ịchekwa n'okpuru tebụl ma ọ bụ mkpuchi mgbe m na-arụ ọrụ.
Ọbụghị naanị na echekwara m ego wee nweta omume nke nyeere m aka ịsetụ nnukwu achịcha bekee, achọpụtara m ụzọ dị mma iji hụ obodo ahụ. Mana nkwakọ ngwaahịa abụghị naanị ihe EEZZ D3 ga-enye, n'agbanyeghị ọnụahịa dị ọnụ ala nke $ 599 n'oge ntọhapụ, EEZZ D3 gụnyere ihe ndị dị elu dịka Shimano azụ derailleur, KM C chain, na ngwaahịa dị mma sadulu. Drivegbọ atọ ahụ na-agba ọsọ nwere ike ọ gaghị ezuru maka ịgba ọsọ, mana ọ bụ nnukwu mmụba site na ụdị ọsọ ọsọ nke igwe kwụ otu ebe a, na-enye ọtụtụ ihe na-enye ohere maka nnukwu ọsọ na ụlọ na otu gia maka oke ugwu.
Otu onye nyocha hụrụ igwe kwụ otu ebe ahụ ka ọ weghachi 'ihe ịtụnanya ngwa ngwa' ma nwee ike kparịta '' ugwu ndị kachasị elu 'nke Vancouver'. Usoro mpịachi na EEZZ D3 dị mfe ịrụ ọrụ, yana onye nyocha na-erughị 15 sekọnd iji melite igwe kwụ otu ebe. Enwetụbeghị m onwe m ma achọtara m usoro dị mfe iji, ọbụlagodi mgbe m na-eyiri uwe mwụda na-agba oyi.
Ọdịdị dị mfe nke naanị 21.5 pound mere ka igwe kwụ otu ebe dị mfe ịrịgo steepụ na n'ụgbọ ala. N'adịghị ka Brompton, anyịnya igwe na-enye otu gearing, igwe kwụ otu ebe a anaghị agagharị mgbe a na-apịaji, kama ọ na-akwụ ụgwọ ya na obere ọkụ ya na ihe karịrị naanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọnụahịa ahụ.
Naanị ihe anyị ga-achọ ịhụ gbanwere gbasara EEZZ D3 bụ nha oke, ndị na-agba ihe karịrị ụkwụ isii kwesịrị ile anya ebe ọzọ dị ka ogo sadulu anaghị eme ha ikpe ziri ezi. Ọ dịkwa mma ịmara na mbibi nke mpụga na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ karịa ụlọ ọrụ dị n'ime nke ndị ọzọ na-ahọrọ na a ga-ejikwa nlezianya derailleur mee njem n'oge njem. N'agbanyeghị nsogbu ndị a, EEZZ D3 bụ ezigbo ezigbo enyi na ụfọdụ ndị nyocha Amazon zụtara ya na D3 ya maka njem ha gburugburu ụwa.
Ya mere, na-achịkọta elu anyị n'elu mpịachi anyịnya igwe nke 2019. Anyị na-atụ gị ụtọ na ya. Hapụ ihe dịka na edemede ahụ ma ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ ebe a, pịa bọtịnụ ịdenye aha.
Nwee ọmarịcha ụbọchị ruo oge ọzọ.
Igwe igwe apịtara apị dị mma?
.B.mpịachi igwe kwụ otu ebebụukwunhọrọ, karịsịa maka ndị njem ma ọ bụ ndị nwere oke ohere. Ha na-enye ndị na-agba ha ọtụtụ elele ma na-adọta uche maka ezigbo ebumnuche. Na mgbakwunye, ha na-atọkwa ụtọ ịgba ịnyịnya. Na mgbakwunye, dị ka ọ bụla ọzọigwe kwụ otu ebe, ha na-enyekwa ahu ike ha ma odi nma maka gburugburu.4 2018.
Nabata ụmụ okorobịa si Maine ọnọdụ okpomọkụ anaghị erute ogo 80 na ụbọchị ise na-esote ya mere igwe na-acha anụnụ anụnụ na n'ikpeazụ ihu igwe na-atọ m ụtọ, n'ụzọ, dịka m maara na ọ bụ obere okwu karịa Arby nọ na Portland karịa M na-atụ aro ma eleghị anya, anọ m oge ole na ole gara aga A na-amaghị ihe ọtụtụ afọ, mana enwere iwu na mpaghara Portland City nke na-amachibido ebe a na-adọba ụgbọala n'otu ntabi anya nke RV, nke gụnyere ihe onwunwe nke onwe ebe ahụ ruo nwa oge ruo mgbe ha malitere ịkwụsị narị dollar. Iwu na RVs na-adọkpụ ihe ndị mmadụ, ma ọ bụ akụ ọha, ma ọ bụ ihe ọ bụla m achọghị ibi, ọ dịghị mkpa Portland bụ naanị obere obodo na-enweghị isi na steeti Maine na m na-ezube ịnụ ụtọ oge okpomọkụ ebe ọzọ ebe ọ bụ a obere ihe ụtọ maka motorhomes na-ekwu okwu banyere obi ụtọ na njem. Igwe m na-atụgharịgharị abatala, yabụ nke a bụ amazon ịzụta, ọ bụ igwe mpịakọta mpịachi, ọ na-ewe mgbakọ ka m wee mepee nwa okorobịa a wee hụ otu o si kọwaa ya na otu o siri sie ike itinye ọnụ, ka anyị na-ezumike na unboxing ebe a- na ntọlite ​​na-adọ, n'ihi na ọ bụrụ na ị hụrụ m ikpeazụ isiokwu, eleghị anya ị chọpụtara n'otu oge na ha zitere m a na-acha ọcha igwe kwụ otu ebe, ọ bụghị-acha anụnụ anụnụ igwe kwụ otu ebe m nyere iwu na ọ na-abịa na anọ agba di iche amaghi m ihe mere ha jiri zitere m igwe acha ocha, o bughi ihe ojoo, enwere ihe ichoro n’ime ya, mana o bu igwe ocha n’onwe m enweghi nsogbu na amazon, nke a bu nnukwu ahia na itinye ego ya mere abum aga m akpo ma hu gi ihe ha choro ime. Hey, enwere m nsogbu na iwu m nwetara site na Amazon.
Sent zitere m na-ezighị ezi na agba igwe kwụ otu ebe. Ee ọ bụ Eric, ha nwere agba anọ dị na naanị otu n’ime ha bụ Amazon Prime, nke ahụ bụ ihe siri ike na-acha anụnụ anụnụ nwere ụfọdụ ụda olu m nwetara igwe kwụ otu ebe siri ike nwere ụda ojii yana etu esi acha abụọ ma ọ bụ atọ ị nwere ike ịgwa mu asi na obu gi bu nke m ga enweta na o bu ya mere i jiri chee na achoghi m ins a white? Enwere m ekele maka ịkwụwa aka ọtọ gị maka ịgwa m na ha anaghị acha anụnụ anụnụ mgbe ha rere m otu na-acha anụnụ anụnụ, nke ahụ dị mkpa n'ihi na ọ baghị uru oge m ichere izu ọzọ maka Anna, zitere m nke a na-acha ọcha ọzọ, yabụ m kwuru, yabụ m nwee ekele maka ịkwụwa aka ọtọ gị, ị nwere ike inye m ego na nke ọcha ahụ wee nye m ego ka m nwee ike see n'okporo ámá ọzọ ka m wee kpọọ amazon wee mee ya ndị ziri ezi m na-ekwu na ọ siri ike njem? n'ihi na ị maara na enweghị m izu ọzọ ma m na-achọ itinye nke ahụ nke ọma, ha gara n'ihu wee wepụ otu narị na dọla iri anọ site na ụgwọ ọnụahịa ịzụta nke a na-eweghachighị na akaụntụ m na kaadị onyinye ma na kaadị akwụmụgwọ m, m debit kaadị n'ime ụbọchị ise, n'ihi ya, m na-ekwu, M nwere ihu ọma nwetara achịcha na igwe kwụ otu ebe ọkara arahụ na m ịma ihe na agba na ọ bụ na a price ọ bụ maa kwesịrị ya, n'ihi ya, ọ niile na-arụ ọrụ ọpụpụ na nke ahụ anaghị m enwe mmasị na nrụgide Ọ bụ naanị ihe m nyere iwu na ọ ga-ewetara m ihe ọ bụla iji chere, ha enweghị acha anụnụ anụnụ na ngwaahịa ka ha wee mee otu ihe ma ọ bụrụ na m laghachi na-acha anụnụ anụnụ ma degharịa ya. acha anụnụ anụnụ, ọ ga-ezitere m otu ọcha ọzọ, yabụ m ga-aga were narị dollar na iri anọ site na ọnụahịa ma kpọkọta igwe kwụ otu ebe a, ụmụ okorobịa, anyị nwetara ụdị ọcha nke ogige mpịachi ogige niile gbakọtara dị ka nke a , ọ niile na-abịa ọnụ tightened dị ka m ga-achọ, ihe niile bụ kemeghari ebe a otú ahụ ka m gbanwee handlebars otú m chọrọ niile posi ihe ndi ozo na brek na gia di iche dika m choro oche bu soso akuku nke na adighi m obi uto n'ihi na achoro m ya rue ugbua ma i nwere ike ihu ihe ngbanwe a na-agbanwe agbanwe bu ihe nkpuchi ebe a nke bu ihe ojoo ma enwere m ike inweta sanded na dị nnọọ ájá ájá dị na inch ka m wee nwee ike ịnọdụ ala ebe m nwere ike chọọ ka ọ dịrị mma. Ọ ka nwere ike ime, mana ụkwụ m fọrọ nke nta ka ọ gbadata na pedal ugbu a, yabụ ee, nke a bụ igwe kwụ otu ebe m ga-apụ na obere obere tes m.
Anaghị m agbago ebe a na-ahapụ naanị ụmụ a, ọ bụ ezigbo ọmarịcha, na-atọ ụtọ na m ga-enwe ike ịnweta ikuku ọhụụ na mmega ahụ na agagharị na igwe kwụ otu ebe dị mma na ụgbọala m na 21 gears m gbagoro elu ugwu ma enwere m mmasị na ya nke ọma na kọmpat M nwere ntakịrị esemokwu m chere na ọ bụ breeki ihu breeki n'ihu ebe a na-ehichapụ n'èzí ka ọ bụrụ na ọ bụghị nke ọma ebe ahụ enweghị m ike ịkọ ma ọ bụrụ na nke a bụ naanị oge ịme ihe bit nke nnyocha ma ọ bụ ma eleghị anya, m nwere ike iji a washer itinye na e nwere ihe na-na mpe mpe akwa anya, ọ na-emetụ a bit na arub na mgbe m na-agba ịnyịnya ma ma ọ bụghị eeah ya a 26 nke anụ ọhịa ahụ mpịachi ugwu igwe kwụ otu ebe na ugbu a, m na-aga na-agbalị iji gosi otu o si apịaji. E nwere ngụkọta nke ihe anọ ị nwere ike ime iji mee ka ihe a pere mpe. Buru ụzọ wepụ oche ahụ, pịazie ụkwụ anyị na-ewepụ aka ahụ ma debe ha n'akụkụ ma enwere m mpempe aka ọzọ ebe a, nke a ga-agbanye igwe kwụ otu ebe na ọkara, yabụ lee otu o si ejide, ọ nwere ike ịga nke ahụ ụzọ.
Aga m egosi gị etu osi dị sentimita iri na atọ n’obosara, ebe ana - agbatị ụkwụ ya na ogwe aka ya adịghị mma? ịga ebe ahụ ọ nwere ike ịba abụba ma ọ bụ ihe ọ bụla, ugbu a, anyị na-ele anya na sentimita iri na atọ n'obosara, mara mma dị egwu, mara mma nke ọma ka ọ ghara ịchekwa ya n'èzí, ọ nwere ike ịga ogologo ebe m na-adọba ụgbọala, naanị ihu igwe, mara mma dị jụụ ma ọ bụrụ na ịnwere igwe kwụ otu ebe? Ọ bụ ntakịrị ihe mgbu ịre igwe kwụ otu ebe iji dozie breeki, mana m nwetara oku site na Greekley taa, ha nwere akụkụ niile nke OEM Chevy drum akpụkpọ ụkwụ na ntụgharị ntụgharị nke m ga-agbanye ogige ahụ n'ụtụtụ echi 7:30 m na-eche maka ndenye ego na n'ọnụ ụlọ ogologo nke ụtụtụ na-atụ anya na anyị mechara dozie a The Epic breeki nsogbu na Chevy Chassis na njikere maka ọhụrụ ahụmahụ na Maine M hụrụ n'anya Maine, ọ bụ oge na-ebe a na m n'ezie na-ekele ya ọzọ, na Renee na Monique ka m nọrọ ebe a na ihe onwunwe mgbe m na-emeso ihe ole na ole, mana ee, igwe kwụ otu ebe ga-atọ ụtọ ịnyagharị na Jackson
Ọ bụrụ na ị tụgharịrịrị crank na abeltụgbọalaigwe kwụ otu ebe, ị ga-achọpụtala na ha adịghị atụ ogho dị ka nnwere onwe dị kayinyeụgbọalaanyịnya igwe.Eririenye a ole na ole mma uru n'eluagbụ: ogologo ndụ (30,000km!), ogologo na-enweghị nlekọta ụgbọala (enweghị lubema ọ bụdegreaser), ime ihe n'olu na idi obere.24.12.2019
Belt draịvanwere ikeikpeazụ10,000-20,000 kilomita tupu ọ dị mkpa ka edochie ha. Otu ụzọ isi gbatịkwuo ndụ nke ụgbọala gị bụ ịgbanwe agbụ na narị kilomita ise ọ bụla.20.04.2020
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè dị mma maka ogologo oge?
Brompton M6l 2017mpịachi igwe kwụ otu ebedị ezigbo mmaigwe kwụ otu ebemaka njegharị. Ndị metụtara ha na 'ndị na-mpịachi'okporo ụzọ ma ọ bụ ụfọdụ ịnyịnya ígwè ndị ọzọ na-agbadata isi okwu ahụ. Nke a Brompton siigwe kwụ otu ebeoghere na ịhazi ihe karịrị ịsọ mpi maka ịnyịnya ígwè nkịtị.
Kpakọba anyịnya igweNjirimara ọtụtụ sentimita nke gia dị ka nke ọkọlọtọigwe, ya merenwere ikemaa gbaa ịnyịnyaugwu. N'ihe banyere ugwu ma ọ bụ ugwu, ị ga-enwe obere mgbada, nke pụtara na ị ga-achọ otu n'ime mmadụ ole na olempịachi igwe kwụ otu ebeụdị ndị nwere atụmatụ a.
Ọ bụ ezie na ha na-agbakwụnye mmetụ dị na ntaneti ahụ ma nwee ike ịbụ ihe na-adịghị mma ma a bịa n'ịdị na-agba ịnyịnya, ị nwere ike ịkwụsị izu asịrị ọ bụla nke njikwa ejighị n'aka, obere mgbatị na mgbalị ọzọmpịachi anyịnya igwena-enwe obere wiil dị mfe ịnyagharị ma na-adị mfe karị ibu.08.21.2019
Ime mpịachi anyịnya igwe agbaji ngwa ngwa?
Kpakọba anyịnya igwesiri ike ma sie ike. Hameeọ bụghịagbaji ngwa ngwaọ gwụla ma ibenye ha ibu oke.
.B.yinyeụgbọalaejia na-aga n'ihu akaghị nke metal njikọ, ebe abeltụgbọalaejiakaghị nke roba na-agbanwe agbanwe (ugboro ugboro na eriri ike ike ma ọ bụ ọla n'ime) Ayinyembanye chọrọ usoro mmanu mmanu. Abeltdraịva adịghị. Ayinyembanye na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti ntinye na mbugharị.
Enwere igwe eletriki mpịachi ọ bụla nwere eriri belt?
The Bridgestone Picina bụ a mpịachi igwe kwụ otu ebe na-ewu ewu na Japan, ma ọ dịghị mgbe n'ezie na-ere na West. Ugbu a, mpịachi igwe kwụ otu ebe bụ nnukwu niche. Na 1984, onye mmebe Marks Sanders jikọtara ya na Gate Corporation iji mepụta eriri belt maka igwe kwụ otu ebe na USA.
Kedu igwe igwe kachasị mma na ụgbọala Gates?
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, igwe kwụ otu ebe ikpeazụ na ndepụta anyị nke igwe kwụ otu ebe kacha mma na Gates Belt Drive bụ Tern Verge S8i mpịachi igwe kwụ otu ebe. Ọ bụ ihe a na-adịghị ahụkebe ịchọta igwe kwụ otu ebe na Gates, mana Tern etinyegoro sistemu ahụ n'akụkụ igwe kwụ otu ebe na-agbago obere ma na-agba ịnyịnya yana igwe kwụ otu ebe na-adịghị.
Gịnị bụ ihe mbụ anyịnya igwe na a ụgbọala belt?
Ejiri ha na igwe kwụ otu ebe na mbido narị afọ, mana ịnyịnya ígwè azụmaahịa mbụ nwere eriri mbanye bụ aha ọjọọ Bridgestone Picina na 1980. Bridgestone Picina bụ igwe mpịachi mpịachi na-ewu ewu na Japan, mana anaghị ere ya na West. Ugbu a, mpịachi igwe kwụ otu ebe bụ nnukwu niche.